rubatsiro - ALinks
Zvinyorwa pane rubatsiro
Matumba echikafu muBihar, kwaungawana kupihwa chikafu munzvimbo dzese
January 17, 2022 Demi rubatsiro, Bihar
Ndiri kugovera ruzivo nezve kugoverwa kwechikafu kuri kuitika muBihar. Zvakare, ini ndakapa dunhu rinehungwaru runyorwa rweveruzhinji chikafu chekugara. Vanhu vazhinji, mapoka, uye vamwe vanhu vakaita basa remagamba nekupa kudya kune anoshaiwa. Tinotenda
Kugoverwa kwechikafu muDhihihi: kupi kwekuwana chikafu chemahara muDhihi?
November 13, 2020 Demi rubatsiro, India
Muchikamu chino, ini ndicharatidza rondedzero yenzvimbo dzekuyamura muDelhi uye nedzimwe nzira dzinowanikwa dzekuwana chikafu chemahara kana uine nzara. Hurumende yenyika pamwe nemunharaunda, mukubatana nemasangano ezvitendero, masangano akazvimirira nevanhu, ndizvo
Ndekupi kwekuwana Night Shelters padhuze newe? Tarisa Pano!
June 3, 2020 Demi rubatsiro, India
Nzvimbo dzekugara dzehusiku padhuze neni Kuti uwane dzimba dzekugara kuti ugare padyo nekwaunogara, unofanirwa kuvhura google mepu pafoni yako. Iwe unogona zvakare kutsvaga pane yako foni. Iwe unofanirwa kupinda "husiku husiku padhuze neni". Gadzira
Nzvimbo dzekugara dzechikafu pedyo neni muIndia? Nzira yekuwana sei pekugara padyo nekwauri kuIndia?
Dai 27, 2020 Demi rubatsiro, India
Kuti uwane pekugara padyo neni muIndia, uchafanirwa kungonyora 'Dzimba dzekudya mukati kana kuti 'Nzvimbo dzehusiku mukati paGoogle mepu. Mune mepu iyi, Unogona zvakare kuona kuti ndeipi nzvimbo
Chimbudzi Amphan chikafu pekugara
Dai 24, 2020 Demi rubatsiro, India
Zvekudya nepekugara, nyora paGoogle Mepu, "dzimba dzekudya padhuze neni" kana "dzimba dzekugara usiku padhuze neni" kana "dzimba dzekudya muOdisha" kana "dzimba dzekudya muWest Bengal" .Iwe unogona zvakare kuenda kuMepu My India uye sarudza " Nzara Ruyamuro Nzvimbo
Ndingawanepi chikafu? Kugoverwa kwechikafu muIndia
Dai 18, 2020 Demi rubatsiro, India
Kubva munaKurume 2020, kugoverwa kwakawanda kwechikafu kuri kuenderera muIndia kune chero waanoda. Tichaisa pano pazasi ruzivo rwakawanda rwatinogona kuwana mumazuva ano. Kuti uwane pekugara kuti ugare padyo nenzvimbo yako, iwe chete
Kudya Kwekugovera Misasa muJaipur
April 14, 2020 Demi rubatsiro, India
Iwe unowana ruzivo mune ino chinyorwa nezve akati wandei arikuenderera kwekugovera chikafu mumisasa muJaipur. Huwandu hwakazara wenyaya muIndia ndedze gumi nemakumi matatu nemakumi matatu nematanhatu. Zvakare, huwandu hwevakafa kubva kuutachiona uhu i10,363. Nezuro chaiye nhamba yacho yanga iri pamusoro
Kudya Kwekugovera Misasa muPunjab
April 8, 2020 Demi rubatsiro, India
Mune ino chinyorwa, iwe unowana ruzivo nezvemisasa yekugovera chikafu muPunjab. Huwandu hwevanhu vari kukanganiswa ne coronavirus huri kuwedzera kuwedzera zvakanyanya. Nezuva ranhasi (08, Kubvumbi 2020) pachezvayo, iyo nhamba makumi mashanu neshanu yemakumi matatu emakesi yakajeka inowedzera
Nzara Dzekusasa Makampu MuUtartar Pradesh
April 7, 2020 Demi rubatsiro, India
Iwe unozowana ruzivo nezve inoenderera mberi nzara-yekuyamura misasa mu Uttar Pradesh mune ino chinyorwa. Sezvo pa7th Kubvumbi 2020, iyo yakazara huwandu hweanoshanda zviitiko muIndia ari 4,911. Huwandu hwerufu hwakawedzera kusvika pa137. Pane iyo